मेरा बुवा । प्रेरणादायी कथा - Lekhapadhi प्रेरणादायी कथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २२ भाद्र २०७८, मंगलवार १४:०१ मा प्रकाशित
दुई भाइहरु एक शहरमा बस्थे । उनीहरु मध्ये एक शहरको सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठित व्यापारी थियो र अर्को प्राय जसाे नसामा रहने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, रिसालु, झगडालु मान्छेहरू कुटदै हिडने गर्दथ्याे ।
जब मानिसहरु उनीहरु को बारेमा थाहा पाए । उनीहरु सोच्थे कि किन दुई बीच धेरै फरक छ जब दुबै एउटै आमा बुबा को छोराछोरी हुन्, एउटै शिक्षा प्राप्त गरीरहेछन् र ठ्याक्कै उस्तै वातावरण मा हुर्किए । केहि मानिसहरु पत्ता लगाउने निर्णय गरे र साँझ भाइहरु को घर पुगे।
जब उनीहरु पहिलाेकाे घर पुगे, घर भित्र पस्ने बित्तिकै उनीहरु एक रक्सीले मातेको मान्छे देखे । उनीहरुले सोधे, “भाइ तिमी किन यस्तो छौ? यो सब गर्नुको कारण के हो?”
“मेरो बुबा”, भाइले जवाफ दिए।
“बुबा !! …। त्यो कसरी ?” मानिसहरूले सोधे
उसले भन्याे, “मेरो बुबा एक शराबी (नसालु) हुनुहुन्थ्यो, मेराे बुबा प्राय मेरी आमा र भाइलाइ दुबैलाई कुटपिट गर्दथे । घरमा झगडा गर्ने, काम नगर्ने, रिसालु स्वभाबकाे मेराे बुबा भइसकेपछि म पाे कस्ताे हुँला र…….।”
तब उनीहरु अर्को भाइकहाँ गए, उनी आफ्नो काममा व्यस्त थिए र केहि समय पछि उनीहरूसंग भेट्न आए,
“माफ गर्नुहोस्, मलाई आउन केहि समय लाग्यो।” भाइले भन्यो, “मलाई भन्नुहोस् म कसरी मद्दत गर्न सक्छु? “
मानिसहरूले भाईलाई एउटै प्रश्न सोधे, “तपाइँ एक सम्मानित व्यापारी हुनुहुन्छ, तपाइँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, सबैले तपाइँको प्रशंसा गर्दछन्, तपाइँको उपलब्धिहरुको कारण के हो?”
“मेरो बुबा”, जवाफ आयो।
मानिसहरु आश्चर्य मा सोध्छन्, “त्यो कसरी?”
“मेरो बुबा एक शराबी हुनुहुन्थ्यो, उनी रक्सी पिएर हामीलाई पिट्थे, म यो सबै चुपचाप हेरिरहन्थे । तब मैले निर्णय गरेको थिएँ कि म यो जस्तो हुन चाहन्न, मँ एक सभ्य, सम्मानित, असल र ठूलो मानिस हुनु पर्छ। र अाज म त्याे बन्ने प्रयासमा छु र बनिरहेकाे छु, बनेकाे छु। ” भाइले भन्याे।
शिक्षाः प्रिय पाठक मित्रहरू, हामी संग जे पनी हुन्छः सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष । याे आवश्यक छ कि हामी सकारात्मक पक्षमा ध्यान केन्द्रित गराैं र त्यहाँबाट प्रेरित हुनुहाेस ।